Terms & Condition - Funlandia
Iyo kambani Funlandia Play System Inc.
Kugamuchirwa ku funlandia.com!
Matemo nemamiriro aya anodonongodza mitemo nemirau yekushandiswa kwewebhusaiti ye funlandia.com, iri pa www.funlandia.com.
Nekuwana iyi webhusaiti, isu tinofungidzira kuti unotambira aya mazwi nemamiriro.Usaenderere mberi nekushandisa funlandia.com kana usingabvumi kutora zvese zvirevo nemamiriro pane ino peji.
Izwi rinotevera rinoshanda kune aya mazwi nemamiriro, Chakavanzika Chirevo uye Chiziviso Chekuzivisa uye Zvibvumirano zvese: "Mutengi", "iwe" uye "wako" anoreva iwe, munhu anonyoresa pane ino saiti uye anobvumirana nemitemo yeKambani."Kambani", "Isu", "Isu", "Yedu" uye "Isu", zvinoreva Kambani yedu."Bato", "Mapato" kana "Isu", zvinoreva zvese mutengi uye isu pachedu.Matemu ese anoreva kupihwa, kugamuchirwa, uye kutariswa kwekubhadhara kunodiwa kuita maitiro erubatsiro rwedu kune Mutengi nenzira yakakodzera kwazvo nechinangwa chekuzadzisa zvinodiwa neMutengi zvine chekuita nekupihwa kweKambani masevhisi, zvinoenderana uye zvichienderana nemutemo unoshanda weNetherlands.Chero kushandiswa kweizwi riri pamusoro apa kana mamwe mazwi muumwechete, muzhinji, capitalization, uye/kana iye kana ivo, anonzwisiswa seanochinjika uye nekudaro achireva zvakafanana.
Mazhinji mawebhusaiti anodyidzana anoshandisa makuki kutora data remushandisi pakushanya kwega kwega.Makuki anoshandiswa newebhusaiti yedu kugonesa kushanda kwedzimwe nzvimbo kuti zvive nyore kune vashanyi vewebhusaiti yedu.Vamwe vedu vanobatana/vanoshambadzira vatinoshanda navo vanogona kushandisa makuki.
Kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, funlandia.com uye/kana vanopa marezinesi ndivo vane kodzero dzepfuma yeruzivo rwezvinhu zvese pa funlandia.com.All intellectual property rights akachengetwa.Unogona kuwana izvi kubva ku funlandia.com kuti uzvishandise iwe pachako, zvichienderana nezvirambidzo mune aya mazwi nemamiriro.
1.publish zvinyorwa kubva funlandia.com
2.sell, rendi kana sublicense zvinhu kubva funlandia.com
3.reproduce, duplicate kana kukopa zvinhu kubva funlandia.com
4.redistribute zvirimo kubva funlandia.com.
Chibvumirano ichi chinotanga pazuva rechibvumirano ichi.Matemo edu nemamiriro akagadzirwa uchishandisa T&C jenareta.
Zvikamu zvesaiti ino zvinopa vashandisi kugona kutumira uye kugovana maonero neruzivo mune dzimwe nzvimbo dzesaiti.funlandia.com haisefa, kugadzirisa, kuburitsa kana kuongorora zvakataurwa vasati vavapo pawebhusaiti.Maonero haaratidzi maonero nemafungiro e funlandia.com, vamiririri vayo, uye/kana vanobatana navo.Maonero anoratidza maonero nemafungiro emunhu ari kutumira maonero nemafungiro avo.Kusvika pazvinobvumidzwa nemutemo unoshanda, funlandia.com haizove nemhosva yeMazano kana chero mhosva, kukuvadzwa, kana mutengo wakakonzerwa uye / kana kutambura nekuda kwekushandisa chero uye / kana kutumira uye / kana kutaridzika kweiyo Comments pane ino Webhusaiti.
funlandia.com inochengetera kodzero yekutarisa Mafungiro ese uye kubvisa chero Pfungwa dzinonzi hadzina kufanira, dzinogumbura, kana dzinokonzera kutyora kwemitemo nemamiriro aya.
Iwe unobvumidza uye unomiririra izvo:
1.une mvumo yekuisa Mazano pawebhusaiti yedu uye uve nemarezinesi ese anodiwa uye zvibvumirano kuzviita;
2.Maonero haatyore chero kodzero dzepfuma yekuziva, kusanganisira asi isingaganhurirwe kune chero kodzero, patent, kana trademark yechero bato rechitatu;
3.macomments haizove nezvinomhura, zvinyadzi, zvinogumbura, zvisina hunhu kana zvimwe zvisiri pamutemo zvinhu zvinoumba kupinda kwekuvanzika;
4.Maonero haashandiswe kukumbira bhizinesi kana tsika kana kuratidza zviitiko zvekutengesa kana zvisiri pamutemo.
Iwe apa unopa funlandia.com rezinesi risiri rega rekushandisa, kuburitsa, kugadzirisa uye kupa vamwe mvumo yekushandisa, kuburitsa uye kugadzirisa chero eMazano ako mune chero uye ese mafomu, mafomati, kana midhiya.
Hyperlink kune zviri mukati medu
Masangano anotevera anogona kubatanidza kune webhusaiti yedu pasina mvumo yakanyorwa yakanyorwa:
1. masangano ehurumende;
4.online dhairekitori vaparadzi vanogona kubatanidza kune webhusaiti yedu nenzira imwechete sezvavanobatanidza kune mawebhusaiti emamwe masangano akanyorwa;uye 5.system-wide Accredited Businesses kunze kwekukumbira masangano asingabatsiri, nzvimbo dzekutengesa dzinobatsira, uye mapoka ekutsvaga mari, izvo zvingave zvisingabatanidzi webhusaiti yedu.
Masangano aya anogona kubatana nepeji yedu yekumba, zvinyorwa, kana rumwe ruzivo rwewebhusaiti chero bedzi link yacho: (a) isiri kutsausa neimwe nzira;(b) hazvireve zvenhema kutsigirwa, kubvumidza, kana kubvumidzwa kwebato rinobatanidza uye zvigadzirwa zvaro uye / kana masevhisi;uye (c) inokodzera mukati memamiriro ewebhusaiti yebato rinobatanidza.
Tinogona kufunga nekubvumidza zvimwe zvikumbiro zvekubatanidza kubva kune anotevera marudzi emasangano:
1.Commonly anozivikanwa mutengi uye/kana bhizinesi ruzivo masosi;
2.dot.com nzvimbo dzenharaunda;
3.Masangano kana mamwe mapoka anomiririra rubatsiro;
3.Online dhairekitori nzvimbo;
4. Internet portals;
5.accounting, zvemutemo, uye mafemu ekubvunzurudza;uye 6.masangano ekudzidzisa uye masangano ekutengeserana.
Tichabvumira zvikumbiro zvekubatanidza kubva kumasangano aya kana tikaona kuti: (a) chinongedzo hachizoiti kuti tiratidze isu kana makambani edu anotenderwa nenzira isina kunaka;(b) sangano harina nhoroondo yakaipa nesu;(c) bhenefiti kwatiri kubva pakuonekwa kweiyo hyperlink inobvisa kusavapo kwe funlandia.com, uye (d) chinongedzo chine hukama neruzivo rwezviwanikwa.
Masangano aya anogona kubatanidza kune peji redu remba chero bedzi chinongedzo: (a) isiri kutsausa neimwe nzira;(b) hazvireve zvenhema kutsigirwa, kubvumidza, kana kubvumidzwa kwebato rinobatanidza uye zvigadzirwa kana masevhisi;uye (c) inokodzera mukati memamiriro ewebhusaiti yebato rinobatanidza.
Kana iwe uri mumwe wemasangano akanyorwa mundima 2 pamusoro uye uchifarira kubatanidza kune webhusaiti yedu, iwe unofanirwa kutizivisa nekutumira email kune funlandia.com.Ndokumbira usanganise zita rako, zita resangano rako, ruzivo rwekusangana, uye URL yewebhusaiti yako, runyoro rwese maURL auri kuda kubatanidza kune webhusaiti yedu, uye runyoro rwemaURL ari pawebhusaiti yedu yauri kuda kubatanidza. .Mirira mavhiki 2-3 kuti uwane mhinduro.
Masangano akatenderwa anogona hyperlink kune yedu webhusaiti sezvinotevera:
1.nekushandisa zita rekambani yedu;
2.nekushandisa iyo Uniform Resource Locator yakabatana nayo;
3.nekushandisa imwe tsananguro yewebhusaiti yedu yakabatana inonzwisisika muchimiro uye fomati yezvirimo pawebhusaiti yebato.
Hapana kushandiswa kweiyo funlandia.com's logo kana imwe mifananidzo inotenderwa yekubatanidza pasina chibvumirano cherezinesi rekutengesa.
Iwe haugone kugadzira mafuremu akatenderedza mapeji edu ewebhu ayo nenzira ipi neipi anoshandura ratidziro yekuona kana kutaridzika kwewebhusaiti yedu pasina mvumo yekutanga uye mvumo yakanyorwa.
Isu hatina mhosva kune chero zvirimo zvinoonekwa pawebhusaiti yako.Unobvuma kudzivirira uye kutidzivirira pane chero zvichemo zvinomuka pawebhusaiti yako.Hapana chinongedzo chinogona kuoneka pawebhusaiti chinogona kunzi chinosvibisa zita, chinonyadzisa, kana tsotsi, kana chinotyora, neimwe nzira kutyora kana kureverera kukanganisa kana kumwe kutyorwa kwekodzero dzemunhu wechitatu.
Isu tinochengeta kodzero yekukukumbira kuti ubvise chero chinongedzo kana imwe link kune yedu webhusaiti.Unobvuma kubvisa zvese zvinongedzo kune webhusaiti yedu nekukurumidza pakukumbira.Isu tinochengetawo kodzero yekushandura aya Matemu uye Iyo Link Policy chero nguva.Nekuramba uchibatanidza kune webhusaiti yedu, unobvuma kusungwa uye nekutevera aya mazwi ekubatanidza.
Kubviswa kwezvinongedzo kubva pawebhusaiti yedu
Kana iwe ukawana chinongedzo pawebhusaiti yedu chinopokana nechero chikonzero, unogona kutibata chero nguva uye kutizivisa.Tichatarisa zvikumbiro zvekubvisa zvinongedzo asi hatisungirwe kuzviita kana kupindura kwauri zvakananga.
Isu hatibvumire kuti ruzivo rwuri pawebhusaiti iyi rwakarurama, hativimbisi kukwana kwayo kana kurongeka;uye hativimbisi kuti webhusaiti icharamba iripo kana kuti zvinhu zviri pawebhusaiti zvicharamba zvichifambirana nenguva.
Kusvika pamwero wakazara unobvumidzwa maererano nemutemo unoshanda, isu tinoramba zvese zvinomiririra, waranti, uye mamiriro ane chekuita newebhusaiti yedu uye kushandiswa kwewebhusaiti ino.Hapana chinhu mune iyi disclaimer chichaita:
1.kumisa kana kusabvisa yedu kana yako mhosva yerufu kana kukuvara wega;
2.kumisa kana kusabvisa yedu kana mhosva yako yekubiridzira kana kubiridzira zvisirizvo;
3.kumisa yedu kana mutoro wako nenzira isingabvumirwi nemutemo unoshanda, kana 4.kusabvisa yedu kana mutoro wako ungave usingabviswi pasi pemutemo unoshanda.
Izvo zvinorambidzwa uye kurambidzwa kwemhosva zvakatsanangurwa muchikamu chino uye kumwewo mune ino yekuzviramba: (a) inotungamirwa nendima yapfuura;uye (b) kutonga zvikwereti zvose zvinobva pazvidziviriro, kusanganisira zvikwereti mukondirakiti, kukanganisa uye kutyora mutemo wepamutemo.
Chero bedzi iyo Webhusaiti uye ruzivo uye masevhisi ari paWebhusaiti akapihwa mahara, isu hatizovi nemhosva yekurasikirwa kana kukuvara kwechero rudzi.
Paunenge uchifunga nezvekuvhura nzvimbo yekuvaraidza, tipe mukana!
Join Yedu Community
Copyright 2010-2021 funlandia.com All Rights Reserved.Hot ProductsSitemap